कार्यान्वयन भ​एन​ न्यायालय सुधारका प्रतिवेदन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कार्यान्वयन भ​एन​ न्यायालय सुधारका प्रतिवेदन
आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९ मा प्रकाशित !
१ फागुन, काठमाडौँ
२०७० चैत २७ गते संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दामोदरप्रसाद शर्माले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दै सांसदहरूले जिज्ञासा राखेको थियो ।
अदालतमा अनियमितता रहने स्वीकार त्यसपछि संसदीय सुनुवाइमा सबै प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभएको छ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले संसदीय सुनुवाइमा ‘अदालतमा अनियमितता छ’ जसमा कानुन व्यवसायीसमेत बिचौलियाको भूमिकामा छन् भन्ने जवाफले निकै तरङ्गित बन्यो ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई प्रतिवेदन तोक लगाई पठाउनुभयो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अग्रसरता प्रभावकारी रूपमा अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन ।
न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अध्ययनका लागि गठित भएको यो पहिलो समिति भने थिएन । यसअघि सर्वोच्चबाटै विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी अध्ययन भएका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयका विकृति पहिचान गरी निर्मूल पार्न भन्दै त्यस्ता समिति बनाएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विकृतिविहीन न्यायपालिकाको परिकल्पनामा प्रतिवेदन तयार पा¥यो तर प्रतिवेदन तयार पार्ने निकायले कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् । सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्य चार समस्या औँल्याउनुहुन्छ । डा. तिमिल्सेनाले भने , ‘‘तत्कालीन समस्या समाधानका लागि गठन भएका हुन्, समस्याबाट भाग्न र कसैलाई देखाउन आयोग गठन भएका कारण पनि यी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । ’’
तिमिल्सेनाका अनुसार, अध्ययन समिति समस्या निराकरण गर्नेभन्दा पनि त्यसका अप्ठेरा नबुझी गठन हुने गरेका छन् । उनका अनुसार अदालत सुधारको ठूलो समस्या नेतृत्वमा नै छ, नेतृत्वले आफैँ समस्या भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु स्वाभाविक हो ।
गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको समितिले चार महिना लगाएर विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। न्यायिक पक्षको सुधार, कार्यविधि सुधार, प्रशासनिक सुधारदेखि आचारसंहितासम्म सुझाव समितिले पेस गरेको छ ।
समितिले कार्यविधिमा सुधार गर्न सदनमा विचाराधीन रहेका संहिता पारितको पहलको सुझाव दिएको छ। यस्तै, धेरै मुद्दा भएका अदालतमा राजस्वसम्बन्धी सबै काम, कारबाही बैङ्कबाट गर्न पनि सुझाव दिएको छ । फैसलालाई पूर्वानुमान योग्य क्यालेन्डर व्यवस्थामा लैजान समितिको सुझाव छ । नजीरमा एकरूपता कायम गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।
समितिले सर्वोच्चका विभिन्न समितिमा न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व रहे पनि खरिद समितिबाट न्यायाधीशलाई हटाउन सुझाव दिएको छ। खरिद प्रक्रिया कागजी एउटा र व्यवहारमा अर्को देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। खरिद एवम् गुणस्तरीयतामा सधैँ प्रश्न उठेकाले पारदर्शिता कायम गर्न पनि समितिको सुझाव छ ।
न्याय सेवालाई आकर्षक बनाउन कर्मचारी सरुवा, बढुवालाई पारदर्शी बनाउन समितिको सुझाव छ । कर्मचारी छनोटमा योग्यता, इमानदारी र ज्येष्ठता कायम गर्ने पनि समितिको सुझाव छ । न्यायाधीशमात्र आकर्षित पद मान्दा रजिस्ट्रार लगायत प्रशासनिक काम, कारबाहीमा ह्रास आइरहेको समितिको ठहर छ। सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले संस्थागत सुधारका हिसाबले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु
NEXT POST Next post: राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन​ चुनाव आवश्यक : डा. शेखर कोइराला
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, फाल्गुन १, २०७३ ०४:५९